Chip thyristor, fifehezana dingana thyristor, fanarenana mahazatra - Runau Electronics
Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd. dia mpanamboatra fitaovana enti-manamboatra semiconductor any Shina. Nandritra ny 30 taona teo ho eo dia nahazo ny fahaizana manokana i Runau mba hanomezana vahaolana farany manavao ny fahombiazan'ny fitaovana elektronika herinaratra. Na oviana na oviana ny raharaha ilaina, ny teknisianina, ny injenieranay, ny ekipan'ny famokarana ary ny herin'ny varotra dia miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay mba hiantohana ny kalitao avo lenta, ny fahazoana ary ny fahombiazan'ny herinaratra.
Fenitra avo lenta
Parehitra tsy miovaova
Kitapo thyristor: 25.4mm – 99mm
Chipreecteur: 17mm – 99mm
Naoty 100-5580A 100-8500V
Naoty 100-5000A 100-5000V
Easy andiana mifandray
Tsara fanoherana ny hatairana
Fampisehoana hafanana tena tsara
Fihetseham-po mihodina mihodina
Fametrahana herinaratra avo
Fonosana mahazatra iraisam-pirenena
Toetra mampiavaka ny mari-pana
Mametraka sy mitazona mora foana
• Ny chip rehetra dia voasedra ao amin'ny TJM, voarara tanteraka ny fizahana an-tsokosoko.
Yourristor avo lenta
• Ampiasaina ny fenitra famokarana avo kokoa
• Fihenan'ny herinaratra ambany indrindra amin'ny fanjakana
• Mety amin'ny fizarana serasera na fifandraisana mifanila miaraka amin'ny sanda Qrr sy VT mifanaraka
• Fahombiazana tsaratsara kokoa noho ny fifehezana tiroristor
• Natao manokana ho an'ny tadin'ny herinaratra sy ny takiana ambonimbony kokoa
• tanjon'ny miaramila ny kalitaon'ny vokatra
Ny fifehezana ny fizaran-tsiranana maimaimpoana anao
• Teknolojia silika mitsinkafona maimaimpoana
• Fihenan'ny volam-panjakana ambany ary fatiantoka miova
• Fahaiza-manao fikirakirana herinaratra optimum
• vavahady manamafy
• Fanamafisana sy fandefasana
• Fampitana herinaratra HVDC / SVC / famatsian-jiro ankehitriny
• Ny endrika vaovao manitatra ny firafitry ny vavahady
• Drafitra famokarana planar
• kapila molybdenum nopetahany ruthenium
• fatiantoka ambany switching
• Fampisehoana di / dt avo
• Mety amin'ny inverter, chopper DC, UPS ary ny hery paompy
Ny vavahady GTO dia mamono ny thyristor
Ny teknolojia famokarana GTO dia nampidirina tamin'i Runau tamin'ny taona 1990 avy any UK Marconi. Ary ireo ampahany dia natolotra ho an'ireo mpampiasa manerantany miaraka amina fampisehoana azo antoka sy asongadiny amin'ny:
• Ny famantarana ny pulsa tsara na ratsy dia mitarika ny fitaovana hamono na hamono.
• Ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana mahery vaika mihoatra ny haavon'ny megawatt.
• Fiaretana mahery vaika, herinaratra avo, fanoherana mahery vaika
• Inverter ny fiaran-dalamby elektrika
• Fanonerana angovo mavitrika amin'ny tambajotran'ny herinaratra
• Fitsipika hafainganam-pandeha haavo chopper DC mahery
• Fahaizana mandroso ankehitriny
• Fihenan'ny herinaratra mandroso indrindra
• Fanoherana avo lenta indrindra
• fahamendrehana miasa be
• Mety ho an'ny mpanelanelana na avo matetika
• Rectifier an'ny welder fanoherana karazana inverter
Module momba ny herinaratra avo lenta
• fenitra fanamboarana avo lenta, tranga maodely marika iraisam-pirenena
• Natao ho an'ny mpampiasa manana fitakiana fampisehoana ambony
• Fanamafisana herinaratra eo anelanelan'ny puce sy baseplate
• fonosana mahazatra iraisam-pirenena
• Fametrahana firafitra
• Toetra mampiavaka ny maripana sy fahaiza-manao bisikileta matanjaka
thyristor rectifier GTO ho an'ny Electric Train
Ny diode mpanitsy herinaratra avo lenta sy ny thyristor nomen'ny Runau Electronics dia mamolavola ny circuit rectifier izay afaka mahatsapa ny fifehezana malefaka eo anelanelan'ny dingana. Azo antoka sy azo itokisana. 2200V 2800V 4400V
Ny fihenan'ny volan'ny conductive ambany, ny fahafaha-manao matanjaka kokoa, ny fiatraikany lehibe & ny fanoherana ny herinaratra miaraka amin'ny vahaolana lafo vidy indrindra, Runau thyristor dia manome ny fahafaham-po rehetra ny rindrambaiko feno fanombohana malefaka tonga lafatra.
Diode fanamafisam-peo fantatra amin'ny anarana hoe diode FRD tena avo lenta ankehitriny, asongadin'ny haavo avo lenta ankehitriny, haavo ambany dia ambany ary hazakazaka hafanana tena ambany, haavo am-baravarana ambany, fanoherana ny tehezana kely, mari-pana ambony. Runau welding diode IFAV dia miainga amin'ny 7100A ka hatramin'ny 18000A izay ampiharina betsaka amin'ny lasitra fanoherana misy matetika avy amin'ny 1KHz ka hatramin'ny 5KHz.
Ny thyristor fehezin'ny dingana sy ny thyristor mifamadika haingana dia novolavolaina tamina dingana avo lenta, asongadin'ny chip dia rafitra mieli-patrana rehetra, famolavolana vavahady nozaraina tsara, fampisehoana mavitrika tsara, fampisehoana haingana, famoizana ambany, mety tsara amin'ny fampiharana fampidirana fampidirana.